musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Sydney inogumisa yayo COVID-19 kukiya
Mamwe ma curbs achazorodzwa mukupera kwaGumiguru, kana nyika yangosvika makumi masere muzana yevagari vane makore gumi nematanhatu zvichikwira kubayiwa zvizere nhomba. Nekudaro, vasina kuvharirwa vachatomirira kusvika Zvita 80 kuti vanakidzwe nerusununguko rutsva.
Sydney, Australia inorerutsa zvirambidzo mushure mekurova makumi manomwe kubva muzana eanokodzera nhomba yekudzivirira vanhu.
New South Wales yakasunungura zvirango zvakati kuti zvevagari vakazara vakabaiwa.
Vakanhorwa zvizere vanhu vanogona kuungana mumapoka evane gumi mumba, kana mapoka evanomwe vari panze, nepo mapoka evane zana achibvumidzwa kuenda kumichato nemariro.
Mushure mekurova kwakanangidzirwa 70% yevagari vanokodzera kubayirwa zvizere, iro guta hombe reAustralia, Sydney, yapedza ingangoita mwedzi mina-COVID-19 kukiya nhasi.
Mutsva weNew prime minister Dominic Perrottet
Nyika ye Nyowani South Wales uye guta rayo guru kana Sydney, vakasunungura zvirambidzo zvinoverengeka zvevakabaya chete zvizere, kusanganisira kubvumidza kushanya kune dzimwe dzimba uye kuwana maresitorendi, zvitoro zvekutengesa, mabhaisikopo uye majimu anovhurika aine akaomarara makapu munzvimbo.
“Ndinoti kumunhu wese nhasi, New South Wales, makazviwana, ”Mutungamiriri wenyika, Dominic Perrottet akazivisa.
Pasi pemitemo yakasununguka, vanhu vakabaiwa jekiseni zvakakwana vanogona kuungana mumapoka evane gumi mudzimba kana makumi matatu panze, nepo mapoka evane zana achigona kuenda kumichato nemariro. Avo vari muKukuru Sydney nzvimbo inozokwanisa zvakare kufamba kupfuura yavo kanzuru yemunharaunda muganho kana makiromita mashanu kubva kudzimba dzavo kekutanga kubva muna Nyamavhuvhu.
“Nharaunda yaita basa rakanakisa kusvika pazvikamu makumi manomwe kubva muzana, asi tinofanira kuramba tichienda. Tinoda kusvika padyo ne70 muzana kubayiwa nhomba kaviri kuitira kuti munhu wese agare akachengeteka, "Gurukota rezvehutano reNew South Wales, Brad Hazzard vakadaro muchitaurwa.
Kufamba kunoita New South Wales nyika yekutanga yeAustralia kubuda kwakakombama pasina kubvisa kutapuriranwa kwehutachiona munharaunda, mushure mekuparuka kwemusiyano weDelta munaJune kwakarasa tariro yekuenderera mberi nekubudirira nzira yekubvisa Australia yakateedzera denda rakawanda kubvira kutanga kwa2020.